Ithuluzi Lokubuyisela Iphasiwedi ye-Outlook. I-PST Software Recovery Software.
DataNumen Outlook Password Recovery iyithuluzi elinamandla lokuphinda uthole iphasiwedi kusuka kumafayili we-Outlook PST abethelwe. Uma ukhohlwa iphasiwedi yefayela le-PST elibethelwe, ngaleli thuluzi, ungalulama kalula iphasiwedi uphinde ufinyelele kokuqukethwe kufayela le-PST.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,604)
Kungani DataNumen Outlook Password Recovery?
Ngichithe amahora ama-5 namuhla ngifuna iwebhusayithi enikezela nge-Outlook Password Recovery yamahhala noma engabizi. Ekugcineni ngathola DataNumen lokho ngokuphelele
Ngichithe amahora ama-5 namuhla ngifuna iwebhusayithi enikezela nge-Outlook Password Recovery yamahhala noma engabizi. Ekugcineni ngathola DataNumen elilingana ngokuphelele nomthethosivivinywa wesidingo sami sokusebenzisa kanye! Easy ukusebenzisa futhi wasebenza like a charm. Ngiyabonga ngokususa amahora ami ekukhungathekeni!
IHouston, eTexas, e-US
Vele uzame ukutakula iphasiwedi yakho ye-.pst.
Kusebenze kahle kakhulu.
Izobekisa iwebhusayithi yakho uma kwenzeka sidinga ukuthenga noma iyiphi
Sizobekisa iwebhusayithi yakho uma kungenzeka sidinge ukuthenga izixazululo ozihlinzekayo.
March 21st, i-2020
Izici eziyinhloko ku DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Sekela iMicrosoft Outlook 97 kuya ku-2019 ne-Outlook yamafayela abethelwe we-Office 365 PST
Ukusekela ukuthola amaphasiwedi weqoqo lamafayela we-PST abethelwe.
Kuhlanganiswe negobolondo leWindows, ukuze ukwazi ukuthola iphasiwedi yefayela le-PST elibethelwe ngomongo wokuqukethwe (chofoza kwesokudla) weWindows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Password Recovery Ukubuyisa Amaphasiwedi Kumafayili Wombhalo We-PST we-encrypted
Lapho ifayela lakho le-PST libethelwe futhi ukhohlwa iphasiwedi yalo, ungasebenzisa DataNumen Outlook Password Recovery ukuskena ifayela le-PST bese uthola iphasiwedi.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola iphasiwedi kusuka kufayela le-Outlook PST elibethelwe nge DataNumen Outlook Password Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-PST.
Khetha ifayela le-Outlook PST elibethelwe elinephasiwedi elizotholwa:
Ungafaka igama lefayela le-PST ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- inkinobho yokuthola ifayela le-PST elibethelwe kukhompyutha yendawo.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Outlook Password Recovery intando starUkuskena nokubuyisa iphasiwedi yefayela le-PST elibethelwe. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma iphasiwedi esefayilini le-PST ebethelwe ingatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungachofoza ifayela le- inkinobho ukukopisha iphasiwedi ebhodini lokunamathisela, bese ulisebenzisa ukuvula nokufinyelela ifayela le-PST elibethelwe ku-Outlook.
Qaphela: Iphasiwedi ingahle ingafani naleyo oyisebenzisile, kepha ingavula ifayela le-PST elibethelwe ngaphandle kwezinkinga.
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 ikhishwa ngoNovemba 9, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 ikhishwa ngoJuni 17, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 ikhishwe ngo-Okthoba 20, 2014
Sekela amafayela we-PST abethelwe nge-Microsoft Outlook 97 kuya ku-2016.
Phinda uthole lost Idatha ye-Outlook, kufaka phakathi ama-imeyili nezinye izinto ezisuka kumadiski angaxutshiwe noma amadrayivu